Soo dejisan GameMaker: Studio 2.2.5.481 – Vessoft
WindowsHorumarinAbuurista ciyaartaGameMaker: Studio
Bogga rasmiga ah: GameMaker: Studio
GameMaker Studio – software ah si ay u abuuraan kulan hababka kala duwan ee hawlgalka. software The awood si ay u abuuraan kulan of noocyo kala duwan oo 2D ama meel 3D leh awood uu ku sheeg isku xigxiga oo ka mid ah tallaabooyinka la qabanaya in waqtiga iyo wadada dhaqdhaqaaqa. GameMaker Studio kuu ogolaanaya in aad bedesho asalka ee ciyaarta, Customize naqshadeynta iyo dar muusig ama codad kala duwan. software ka kooban yahay luqad barnaamij dhisay-in kulamada badan oo horumarsan iyo functional. Sidoo kale GameMaker Studio u saamaxaaya in ay kordhiso software oo isticmaalaya xidhiidhka ka mid ah lagu daro kala duwan.
Abuuraa kulan of noocyo kala duwan
set A of saamaynta graphic iyo dhawaaqa
Dhisay-in luqadda barnaamijyada
Soo dejisan GameMaker: Studio
Faallo ku saabsan GameMaker: Studio
GameMaker: Studio Xirfadaha la xiriira